समाचार - टि-शर्टहरू हाल लोकप्रिय फेसन तत्वहरू हुन्
टी-शर्टहरू हाल लोकप्रिय फेसन तत्वहरू हुन्। तिनीहरू अनौपचारिक, सरल र सस्तो छन्। ती जनता द्वारा खोजिन्छ। त्यसो भए मार्केटमा कति ब्रान्डको टी-शर्टहरू हुन्छन्, र जब साथीहरू भेला हुन्छन् र खाइन्छन्, दागहरू लुगामा ड्रिप हुन्छन्। कसरी सफा गर्ने?
१. धुनु अघि टी-शर्टलाई पल्टाउनुहोला, ताकि नुहाउने क्रममा सुन्दर ढाँचा बिग्रिनेछ।
२. हातले धुनुहोस्, बिस्तारै, शक्ति प्रयोग नगर्नुहोस्,
Directly. टि-शर्टलाई सिधा सुक्खा नगर्नुहोस्, भित्र सुकाउनुहोस्। यसले कपडाहरूलाई बिग्रनबाट रोक्न सक्छ, र कपडा पहेंलो र कडा हुन्छ
The. गाढा र colored्गको टी-शर्टलाई नुनको पानीमा १ ~ २ घण्टा भिजाउन सकिन्छ जब यो पहिलो पटक धोइन्छ, जसले कपडाहरूलाई बिगार्न रोक्न सक्दछ
Dry. सुकाउँदा टी-शर्टको आकार सेट गर्नुहोस्, त्यसैले तपाईले यसलाई जलाउनु पर्दैन।
T. अन्य कालो लुगाको साथ टी-शर्ट न धुनुहोस्, ताकि कपडाहरू फीका हुन नपरोस्, क्रस रंग,
High. उच्च तापक्रम नगर्नुहोस्, र कपासको टीशर्टको पानीको तापक्रम 30० डिग्री भन्दा बढि हुनुहुन्न, ताकि बुढेसकाललाई द्रुत बनाउन र प्रिन्टि ofबाट झर्नु हुँदैन। फुर्सत खेल शर्ट धुने को लागी सुझावहरू 1. राम्रो क्षार र तातो प्रतिरोध।
कसरी स्ट्रेच टी-शर्टहरू धोउने?
कपडाको लोचलाई क्षति हुनबाट बचाउन लोच टेस्ट-शर्टहरू उच्च तापक्रममा इस्त्री गर्नु हुँदैन; बहाव नगर्नुहोस्, जसले कपडाको लोचलाई हानी गर्दछ; केहि लोचदार टी-शर्टहरू कोर-स्पन यार्नले बुनेका हुन्छन्, धागा शुनजी हुन्छ, र कपडाको सतह अधिक मोटा हुन्छ। यो धुनुहोस् जब यो अत्यधिक फ्लफिंग रोक्न भारी हो; लोचदार टी-शर्टलाई सूर्यको संपर्कमा राख्न सकिदैन फेब्रिकको लोचलाई नोक्सान हुनबाट बचाउन।
सामान्यतया भन्नुपर्दा, टी-शर्टहरू धुँदा, मेशिनलाई नधोल्ने प्रयास नगर्नुहोस्, किनकि यसले मुद्रण र कपडाको लोचलाई असर गर्छ। थप रूपमा, तिनीहरूलाई रिभल साइडमा सुकाउनु उत्तम हुन्छ प्रिन्ट गरिएको ढाँचालाई डिस्कोलोर गर्नबाट रोक्न।